Tiorkia: : Mpialokaloka Siriana No Voaheloka Taorian’ilay Fipoahana Tao Reyhanli · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Mey 2013 12:28 GMT
Ny 11 May, Reyhanlı [en] tanàna Tiorka kely any amin'ny sisintany manasaraka an'i Tiorkia sy Syria, no teo ambany fanafihan'ny mpampihorohoro. Io no fanafihana mpampihorohoro goavana indrindra [en] teo amin'ny tantaran'ilay firenena repoblikana 90 taona. Taorian'ny fipoahana, olona sivy no notànan'ny [en] mpitandro ny filaminana. Nilaza ny manampahefana [en] fa fiara roa no nampiasaina nanapoahana baomba ka maherin'ny 50 ireo olona maty ary nahatratra 100 ireo olona naratra mafy. Nefa ao amin'ny media sosialy, nandeha ny tsaho fa maherin'ny 100 no tena isa marin'ireo niharam-boina.
Nibitsika i shiny (@Idauk), mpampiasa Twitter, hoe [Tr]:
Taoriana kelin'ny fipoahana, nandràra ny media tsy hamoaka [en] mikasika ny fipoahan'i Reyhanli ny governemanta Tiorka. Niteraka fahatezerana goavana teo amin'ny media sosialy io fandraràna io. Manoratra ny mpampiasa Twitter denizatam (@denizatam) hoe:
Nanohitra[en] ilay fandraràna ny media ireo mpanao gazety. Ao amin'ny Türkmax, notoherina tamin'ny fomba maro feno esoeso sy mandratra ilay fandraràna ny media, ao amin'ny fampisehoana vazivazin'izy ireo “Heberler”. Ao anatin'ilay horonantsary, nanokatra ny fandaharany tamin'ny fipoahana tao Reyhanli ny mpilaza vaovao . Vokatry ny fandraràna ny media, tsy nahita nambara izy. Ity ilay lahatsary [tr] :
Ilay tranonkala Tiorka miompana amin'ny sary mahery setra sy ny fanomezana endrika, bobiler.org, dia nandefa sary mikasika ilay fandraràna ny media. brewolve, mpampiasa azy io dia nanomana sary mikasika ny fihetsiky ny median'i Tiorkia momba ny fipoahana tao Reyhanli, satria tsy nanao afa-tsy ny nanaraka ny fandaharany mahazatra azy ireo media ary tsy niteny mihitsy momba ny fipoahana tao Reyhanlı. Azo jerena eto ny sary :
Na teo aza ny fanalan'ny fitsaràna Tiorka ny fandraràna ny media, ny 16 May, lahatsary iran'ny YouTube no manamafy fa tratra ny tanjona . Tao anatin'ilay lahatsary [tr], mpanao gazety iray no naka ambavany olona maro teny amin'ny arabe nanontany azy ireny hoe “Ahoana ny hevitrareo mikasika ny Reynhali?”. Valinteny manafintohina no azo; olona iray ihany no nahalàla ny fisian'ny fipoahana, ary vitsy no nahatsiaro izay toerana nisy ilay tanàna, ary ny ambiny tsy nanan-kevitra hoe taiza no nitranga, na inona no nitranga tao Reynhali, na dia dimy andro monja taorian'ny fipoahana aza no nandraketana an-tsary an'ilay lahatsary. Ity ilay horonan-tsary:
Misy koa ireo tatitra [tr] mikasika ny fanavakavaham-bolonkoditra atao amin'ireo Siriana mpialokaloka. Nandritra ny ady an-trano Siriana, nitsoaka nankany Antakya [en], tanàna Tiorka iray any amin'ny sisintany Sirana sy Tiorka, ary Reynhali, tanàna iray ao ihany, ireo mpialokaloka Siriana sy ireo mahery fo. Raha vao niainga ireo mpialokaloka sy mahery fo [en] ho any Antakya, ambony dia ambony ny fihenjanana teo amin'ireo tompon-tany sy ny Siriana. Ao anaty tatitra dia izao no voalaza :
T.C. Zehra Aydogan (@TurkKizi1919) Mpampiasa Twitter, tezitra tamin'ireo Siriana any Antakya :
Mpampiasa iray hafa, T.C.Devrim #ATATÜRK (@saadet_karakus), tezitra tamin'ny governemanta mikasika ny fanampiana ireo mpialokaloka fa tsy ny tompon-tany:
Mpampiasa Twitter i Sami Pelitli (@SamiPelitli) no niteny hoe :
Mibitsika i Hayko Bağdat (@haykobagdat), mpanao gazety, hoe :
Taorian'ny nahafatesana olona am-polony sy tanàna tany an-tsisintany nisy trano efa ho am-polony rava [en], mitohy hatrany ny fiainana any Reyhanli. Bünyamin Salmanyan (@bunyms), mpampiasa Twitter, dia mahatsiaro an'i Mustafa Ayaz [tr], izay maty nandritra ilay fipoahana tany Reyhanli: